Iindaba -Ungazichonga njani iingxaki zolawulo lomgangatho wamatye eplastiki edityaniswa?
1. Ibango lempahla alinako ukubeka ikowuteshini kwindawo yokuqala, kuba ixabiso ngokubanzi lihambelana nomgangatho. Abathengi abaninzi abathandayo babuza kuphela malunga nexabiso leemveliso zeplastiki zelitye kuqala, kwaye emva koko umgangatho, becinga ukuba okoko kungumgangatho weplastiki, kwaye uhlala usetyenziswa. Oku kuvumela abarhwebi abanganyanisekanga ukuba basebenzise amaxabiso asezantsi ukutsala abathengi. Abathengi kungekudala baya kufumana iingxaki ezisemgangathweni, kodwa ngokubanzi ezo mveliso aziqinisekanga, zikhokelela kwilahleko engeyomfuneko yenkonzo yabathengi. Izinto eziphambili zokwenza i-SPC ukutyibilika zii-polyvinyl chloride kunye nomgubo wamatye. IPolyvinyl chloride sisibonelelo esinokuphinda sihlaziyeke esinobungozi kwindalo kunye nakubushushu begumbi. Umgubo welitye yinto yendalo kunye ne-zero formaldehyde, ehambelana nokusingqongileyo. Inkqubo ye-umgca wemveliso yeplastiki yelitye sisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lezinto zokwakha. Umgangatho weplastiki weplastiki ubizwa ngokuba yi-tile-plastic tile tile. Igama elisemthethweni kufuneka libe "ngumgangatho we-PVC vinyl". Luhlobo olutsha lomgangatho oluphuhliswe ngumgangatho ophezulu, uphando oluphezulu kunye nophuhliso. Izinto zokuhombisa zisebenzisa umgubo wemabhile wendalo ukwenza isiseko esomeleleyo esinoxinano oluphezulu kunye nesakhiwo senethiwekhi sefayibha ephezulu, kwaye umphezulu ugqunywe sisambatho esingaphezulu kwesinxibo se-polymer se-PVC esinxibe kakhulu, esiqhutywa ngamakhulu eenkqubo.
2. Ngokoluhlalutyo lwangoku lwemeko yophuhliso lweemveliso zamatye zeplastiki kunye nentengiso ye-intanethi yeenkampani zemigangatho, ixabiso lesowuteshini alikho ngexabiso eliphantsi njengakwimeko zophando ezininzi: A. Sebenzisa izinto ezithambileyo nezibhityileyo ukwenza umgangatho ukufikelela kumgangatho ophantsi womzi mveliso kunye nokufikelela kwinqanaba eliqhelekileyo Imfuno zokuthwala umthwalo; B. Isigaxa okanye ezinye izinto ezingcolileyo ezinxulumene noko zigcwaliswa kwizinto ezisisiseko. Ngenxa yolwakhiwo olubi, kuyakubakho ukungcola kweebhloko okanye iisandi eziwayo xa kusikwa, ezingayi kwenza kuphela umgangatho uthambe, kodwa ukhubazeke ngokulula, kwaye awunakufikelela ngqo kumthwalo. Ibango; C. Sebenzisa iindidi zeglu, kuba kukho ingxaki ngeglue esemgangathweni kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kweglue, kukho umahluko wamaxabiso ongenakuphepheka, loo msebenzi wenza ukuba umgangatho womgangatho uqhume kwaye uboleke kwaye uqhekeke; D.Ukusebenzisa ibhodi engenakucima umlilo okanye ukucekeceke ngokubanzi njenge-veneer, ibhodi engenakucima umlilo ayinakho ukufezekisa ukumelana nokuma kunye nokugruzuka, kwaye ilula kwaye iqhekekile; E. Elona nqaku lihoywa ngokulula ngabathengi, izixhobo zomgangatho zizinto eziqhelekileyo ezingekho mgangathweni, izibiyeli kunye nemiqadi ayinangqondo, kwaye umzimba wonke wenziwa emva kwesixhobo sokhuselo Ithambile kwaye kukho umngcipheko wokuwa.
Umgangatho wokuveliswa komgangatho we-SPC obonelelwe yi-KEPT INDUSTRY ikwabonelela abathengi ngezisombululo zokunceda abathengi basebenzise izinto ezisemgangathweni zeshishini ukufezekisa umgangatho ozinzileyo kunye nolawulo lweendleko olusebenzayo.
Nceda unxibelelane nathi ukuze ubuze I-EIR ekwi-Intanethi SIkhompyuter Nokwadala Machine, ukuthengisa kwethu kuya kubonelela ngesona sibonelelo silungileyo semigca okanye isisombululo.
Ixesha Post: 2021-03-05